तपाईको बच्चाले मोबाइल चलाउछ ? साबधान खतरा सुरु भयो « Arthabazar.com
तपाईको बच्चाले मोबाइल चलाउछ ? साबधान खतरा सुरु भयो
प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७६, सोमबार ०८:४२
तपाईंका बालबालिका मोबाइलमा गेम खेल्ने, टिकटक बनाउने या भिडियो हेर्ने गर्छन् ? यस्तो धेरै मात्रामा गरे उनीहरूलाई मानसिक रोग ‘गेमिङ डिसअर्डर’को समस्या हुनसक्छ । अहिले धेरैजसो बालबच्चा ‘गेमिङ डिसअर्डर’को सिकार हुँदै गएको मनोविज्ञहरूको भनाइ छ ।
उनले भने, “जब बच्चाहरूमा यस्तो समस्या आउन थाल्छ, उनीहरू निदाउन छाड्छन् । शारीरिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदैनन् । खानपान अनियमित हुन थाल्छ । उनीहरू पारिवारिक र सामाजिक जीवनबाट भाग्न खोज्छन् ।” यो अवस्थामा पुग्दा बालबालिका हिंस्रक र आक्रामक हुने बताउँदै उनले एकान्तमा मात्र बस्न रुचाउने, सधैँ उदास रहनेजस्ता समस्या देखिए अभिभावकले बेलैमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।
बालबालिका उदास हुने, खान मन नगर्ने तथा मोबाइल धेरै हेर्ने समस्या लिएर धेरै अभिभावक आफूकहाँ आउने गरेको उनले जानकारी दिए । उनले थपे, “बच्चा फकाउन के गर्नुहुन्छ भन्दा सबैजसो अभिभावकले एउटै जवाफ दिन्छन्– मोबाइल खेलाउने । अर्थात् मोबाइलमा भिडियो हेर्ने वा गेम खेल्ने । अधिकांश अभिभावकको साझा समस्या हो यो । ” यो समाचार आजको गोरखापत्रमा छ ।
वर्ल्डलिंकले ल्यायो ‘तात्तातो हिटरनेट अफर’
काठमाडौं । वल्र्डलिंकले जाडोलाई लक्षित गरी ‘तात्तातो हिटरनेट अफर’ ल्याएको छ । अफरअनुसार
होस गर्नुस- यसरी हुन्छ अनलाइनबाट ठगी
काठमाडाै । पछिल्लो समयमा अनलाइन मार्फत विज्ञापन आउने र अनलाइनबाटै सामान बुक हुने
टेलिकमको अफरः १२ रुपैयामा अनलिमिटेड नाईट भ्वाइस कल
काठमाडाै । नेपाल टेलिकमले १२ रुपैयामा अनलिमिटेड नाईट भ्वाइस कल गर्न सकिने प्याकेज
एनसेलको नयाँ योजना ‘रिचार्जमा चमत्कार’
काठमाडाै । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले ‘रिचार्जमा चमत्कार’ नयाँ योजना ल्याएको छ । यो